Iplastiki yokubumba - Yuyao Jera Line Lokulinganisa Co., Ltd.
Umgca Jera babe ngaphezu 16 zeplastiki yokubumba. Ukubumba ngenaliti kuvelisa inxalenye yeplastiki yeJERA iimveliso zeplastiki. Inkqubo yenaliti yeplastiki yinkqubo yokuvelisa iindawo ezithile ngokufaka inaliti yezinto ezinyibilikisiweyo kwisikhunta. Kwaye ke ukuvelisa khankanya abaza kuzisebenzisa iimveliso zethu. Senza i-R & D kwaye siphuhlisa iimveliso ezinxulumene nemveliso yile teknoloji.
Iplani yokubumba yenaliti yeJera fiber ikakhulu ukuvelisa oku kulandelayo:
-FTTH okubambelela uqinisa, uqinisa wedge kunye yamaphepha zokumisa
-drop wire cable uqinisa
-Iibhokisi ze-Fiber optic kunye nokuvalwa
Izihlanganisi zokugqobhoza umbane
-FTTH ucingo kwizibiyeli
-Fiber optic iadaptha zekhebula
-LV abc iikomityi zokuphela
Ombane Low ombane intambo
Izinto ezisetyenzisiweyo ezisetyenziselwa inaliti yeplastiki ziipolima ezinjengeNylon, iABC, iPC, iPP, njl. Zonke ezi zinto zingahlolisiswayo zibhekisa kumgangatho we-ISO 9001: 2015, kunye neemfuno zethu zangaphakathi.
Ngokusebenzisa le teknoloji, iJera fiber inesakhono sokuphanda kunye nokuyila iimveliso ezintsha kwaye yenze iimveliso zabathengi ezifunekayo ngokusekwe kumanqanaba ethu ngoku. Yenza iJera fiber ibe noluhlu olubanzi lwemveliso ukwanelisa iimfuno ezahlukeneyo zabathengi. Kwaye iimveliso zeJERA zikhuphisana ngakumbi kwiimarike
Ngezi ziphene yokubumba, sinako ukuvelisa iinxalenye ziphene sonke. Igcina iindleko kwaye yenza ixabiso leyunithi leemveliso ukuba likhuphisane ngakumbi, kwaye sinokulawula ngokulula umgangatho ngokwethu.
Ukuphuculwa kwemihla ngemihla kwezixhobo zemveliso kunye nezisombululo zokuphucula ukusebenza kakuhle kwenza iJERA iphucule imihla ngemihla.
Umsebenzi wethu kukubonelela abathengi bethu ngesisombululo esipheleleyo sokwakha uthungelwano lonxibelelwano. Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngokuqhubeka nokusebenzisana, sinethemba lokuba singakha ubudlelwane obunokuthenjwa, bexesha elide.